Igwe temometa akwarium kacha mma, nke kacha atụkwasị obi? | Nke azụ
Natalia Cerezo | 17/08/2021 10:05 | Ngwa
Igwe temometa akwarium bụ ngwaọrụ dị mkpa na -enyere aka idobe okpomọkụ nke akwarium. Yabụ na anyị nwere ike mata na nlele mbụ ma ọ bụrụ na mmiri anaghị ekpo ọkụ, ma ọ bụ oyi niile, na ọ kwesịrị ịdị, ihe dị oke mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka azụ anyị nwee ahụike na enweghị nchekasị.
Agbanyeghị, anyị nwere ike nwee ọtụtụ ajụjụ gbasara ya: kedu ụdị kacha mma? Kedu ihe ekwesịrị iburu n'uche mgbe ị na -etinye ya? N'ọnọdụ ndị a ka ọ dị mkpa ịnweta temometa akwarium? Anyị ga -aza ajụjụ ndị a n'okpuru. Na mgbakwunye, anyị na -akwadokwa ka ị gụọ akụkọ metụtara ya ezigbo okpomọkụ maka azụ azụ ebe okpomọkụ.
1 Themometer kacha mma maka akwarium
2 Ọ dị mma ịnwe temometa n'ime akwarium?
3 Ụdị temometa akwarium
3.1 Ime ụlọ
3.4 Nke Cristal
3.5 Na mmiri iko
3.6 Ihe mmado
3.7 Igwe mmiri na thermometer wuru n'ime
4 N'ọnọdụ ndị a, ọ dị mkpa ịnwe temometa n'ime akwarium?
5 Otu esi etinye temometa na akwarium ka o nwee ike ịtụkwasị obi
6 Kedu ihe ga -eme ma ọ bụrụ na temometa akwarium mebiri
Themometer kacha mma maka akwarium
Measury temometa ...
Thlevel 2 iberibe ...
Thlevel Mini temometa ...
Ọ dị mma ịnwe temometa n'ime akwarium?
Igwe temometa akwarium na -abụ ezigbo echiche mgbe niile, ọ bụghịkwa naanị n'ọnọdụ akwarium, nke chọrọ oke okpomọkụ, mana na ụdị akwarium niile. Temometa, Site n'ikwe ka ị nyochaa ọnọdụ mmiri, ọ na -enyere aka ịhụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na -agbanwe agbanwe n'oge dị iche iche nke ụbọchị, ma ọ bụ ọbụlagodi ịchọpụta nsogbu enwere ike na ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri nke ị ga -edozi ka azụ gị na osisi gị nwee ezi ahụ ike mgbe niile.
Ma ọ bụ ya ihe omumu nke akwarium bu ihe siri ike, nke choro okpomoku kwụsiri ike ka ihe niile ghara ịga ọkụ mmụọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ime ka azụ gị daa ọrịa, n'ihi na mgbanwe ọ bụla na mmiri bụ isi ihe na -enye ha nsogbu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịnwe ngwa a, ka ị nwee ike lelee data ahụ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị (ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gbanwela mmiri na tank ma ọ bụ mgbe i risịrị nri), ka ị nwee ike mara ọnọdụ ya n'oge ọ bụla.
Ụdị temometa akwarium
N'etiti temometa maka aquariums enwere nhọrọ dị iche iche, nke ọ bụla nwere uru na ọghọm nke ya, dị ka anyị ga -ahụ n'okpuru:
Igwe temometa nke ụlọ, dị ka aha ya na -egosi, A na -etinye ya n'ime akwarium, na -enye ohere ịgụ mmiri ahụ nke ọma. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere nnukwu akwarium, ị nwere ike iji ọtụtụ n'otu oge iji hụ na mmiri niile bụ otu okpomọkụ. Ha na -adịkarị ọnụ ala ma enwere ụdị dị iche iche ka ị nwee ike họrọ nke ga -adabara mkpa gị na nke akwarium gị, dịka ọmụmaatụ, jiri iko mmịpụta, na ịdị arọ ka ha wee mikpuo, na -ese ...
Agbanyeghị, ha nwere ụfọdụ ndọghachi azụ, dị ka nke ha adịghị ike ma ọ bụrụ na ejiri iko mee ha, yabụ na ha adabaghị maka akwarium nwere nnukwu azụ, ma ọ bụ ihe isi ike ịgụ ọnọdụ okpomọkụ ebe ọ bụ na ha adabaghị na iko akwarium.
Ihuenyo LCD bụ ụzọ ụdị temometa a na -egosi oke okpomọkụ, nke a makwaara dị ka dijitalụ. Na mgbakwunye na ihuenyo, nke na -apụ na mpụga akwarium, ha na -eji soket etinyere n'ime mmiri were ọnọdụ okpomọkụ, nke bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị mma anyị ga -ahụ iji hụ okpomọkụ nke mmiri dị na ya.
Ọzọkwa, na -abụkarị ihuenyo buru oke ibu ọ na -enyekwa anyị ohere ilele ọnụọgụ na nlele dị mfe, nke na -enye mgbakwunye dị mma.
Digital thermometers bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya kacha arụ ọrụ nke ọma ma a bịa n'ịchịkwa okpomọkụ nke mmiri dị na akwarium anyị. Ọtụtụ na -enwe ihe ngosi nke na -egosi ọnọdụ okpomọkụ, nke a na -edobe na mpụga akwarium, yana ihe mmetụta nke etinyere n'ime ya (ọ bụ ya mere ha ji arụ ọrụ nke ọma n'ịtụ oke okpomọkụ, ebe ọ bụ na ọnọdụ mpụga anaghị emetụta ha). Nhọrọ ọzọ na -atọ ụtọ nke ụfọdụ ụdị na -etinye bụ mkpu na -adọ aka na ntị ma ọ bụrụ na oke mmiri ebili ma ọ bụ daa nke ukwuu.
Naanị ma ọ bụ nke ahụ ha kacha dị oke ọnụ site na listi, yana na ụfọdụ nwere eriri ihe mmetụta dị mkpụmkpụ, yabụ na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ileba anya na nkọwapụta tupu ịzụrụ ha.
Kasị kpochapụwo nke ochie: iko temometa na-enye gị ohere ịlele oke mmiri dị ka ụzọ ochie si dị. Ha na -etinyekarị iko mmịpụta ma ọ bụ na -adị ka osisi iji kwụgide ha na enyo wee debe ọdịdị kwụ ọtọ, nke na -eme ka ọ dị mfe ịhụ ọnọdụ okpomọkụ. Ọzọkwa, ha dị ọnụ ala.
Otú ọ dị, nwere nnukwu ndọghachi azụ, adịghị ike ha, yabụ na ha abụghị nhọrọ akwadoro maka akwarium nwere nnukwu azụ ma ọ bụ ụjọ. N'aka nke ọzọ, ha na -enwekarị ọnụ ọgụgụ pere mpe, nke nwere ike sie ike ịgụ.
Na mmiri iko
Omume XKJFZ ...
Iko mmiri ara bụ otu n'ime Metzọ kachasị mma maka idobe temometa akwarium ziri ezi. Ha na -abụkarị ụdị dị ọnụ ala nke ejiri iko, plastik ma ọ bụ ọbụna nwee eriri dị mfe.
Ọ bụ ezie na ọ bara uru na gburugburu ebe obibi, iko mmiri nwere ọmarịcha ndọghachi azụ, nke ahụ bụ na ha na -adakarị, nke nwere ike bụrụ nsogbu ma ọ bụrụ na anyị ga -enyocha ọnọdụ okpomọkụ n'oge dị iche iche n'ụbọchị.
Novopet temometa maka ...
Thermometers na akwụkwọ mmado Ha na -abụkarị eriri nrapado dị mfe nke akara mmiri dị na ya akara, mana etinye ya na mpụga. Dịka anyị kwuru na mbụ n'ihe gbasara temometa LCD, ha dị ọnụ ala, mana, agbanyeghị, ha enweghị ntụkwasị obi na anyị ga -akpachara anya ma ọ bụrụ na anyị etinye ha n'anyanwụ, n'ihi na ha nwere ike ha agaghị enye oke okpomọkụ ebe mmiri dị. .
N'ikpeazụ, uru ọzọ dị na arụmọrụ nke temometa ndị a, kemgbe nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu na -agbanwe agba dị ka okpomọkụ nke akwarium na -adịgasị iche (dị ka mgbaaka ọnọdụ). Site na inwe ọnụ ọgụgụ buru ibu, ha dị mfe ọgụgụ.
Igwe mmiri na thermometer wuru n'ime
Calentador de Acuario,...
N'ikpeazụ, otu n'ime ngwaahịa kacha atọ ụtọ anyị ga-ahụ n'ụwa nke temometa akwarium bụ ndị na-ekpo ọkụ nwere temometa wuru n'ime ya, nke ha na -enye anyị ohere iji otu nkume gbuo nnụnụ abụọ: iji kpoo mmiri (ihe dị mkpa na akwarium na azụ ebe okpomọkụ) yana tụọ okpomọkụ nke mere na ọ na -adị mgbe niile ka o si metụ aka.
Otu ndọghachi azụ ha na -eweta, bụ na temometa nwere ike ọ gaghị achọpụta nrụrụ aka nke igwe ọkụ, ebe ọ bụ na ọ bụ otu ngwaahịa, ọ bụrụ na ọ nwere mmejọ ọ nwere ike imetụta ma ọkụ ọkụ ma temometa.
N'ọnọdụ ndị a, ọ dị mkpa ịnwe temometa n'ime akwarium?
Anyị ekwuola na mbụ na inwe temometa n'ime akwarium anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu, mana ọ na -aghọ ihe ezi uche dị na ya n'ọnọdụ ndị a:
Na aquariums ebe okpomọkụ, inwe ikpo mmiri ma debe ya n'etiti ogo 22 na 28, temometa bụ ihe dị mkpa. Ụfọdụ ụdịdị nwere ndò nke oke okpomọkụ a, yabụ ị nwere ike jiri anya gba ọtọ hụ ma ọ bụrụ na okpomoku ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị.
Al gbanwee akwarium mmiri Igwe temometa bụkwa ngwa dị mkpa, ebe ọ nwere ike ịdọ anyị aka na ntị maka mgbanwe nwere ike ịdị na mmiri ọhụrụ. Azụ na -enwe mmetụta nke ukwuu maka mgbanwe okpomọkụ nke mmiri nwere ike ịnwe, nke na -adịkarị mfe mgbe ha na -eme mgbanwe mmiri.
N'ikpeazụ, temometa na -arụkwa ọrụ ebube maka gwa gị ma ọ bụrụ na onye na -ekpo ọkụ mmiri adaala ọdịda ọ bụla ka ị ghara ịhụ. Ọ bụ ya mere anyị ji gosi na ọ bụ ezi echiche ịnwe igwe na -ekpo ọkụ na temometa dị iche, yabụ na ị ga -ejide n'aka na ha abụọ na -arụ ọrụ n'adabereghị.
Otu esi etinye temometa na akwarium ka o nwee ike ịtụkwasị obi
Azịza nke ngalaba a ọ ga -adabere nke ukwuu n'ụdị temometa anyị na -eji, ebe onye ọ bụla nwere ọrụ dị iche. Dị ka ọmụmaatụ:
na A na -etinye thermometers na -apụ apụ na akwariumMaka nke a, a ga -akpachapụrụ anya nke ọma ka ị ghara itinye ha ozugbo na anyanwụ ma ọ bụ n'akụkụ isi iyi ọkụ ma ọ bụ ikuku oyi (dị ka ikpo ọkụ ma ọ bụ ntụ oyi).
N'otu aka ahụ, temometa ndị a bụ ezughi oke na nnukwu akwarium, ebe inwe mgbidi gbara ọkpụrụkpụ nwere ike ọ gaghị egosi oke mmiri dị mma.
na Ekwesịrị idobe temometa nke dị n'ime ụlọ mgbe niile n'elu ajịrịja nkume site na ala nke tank iji nwee ike ịhụ ọgụgụ nke ọma (yana n'ụzọ ziri ezi, n'ezie).
N'ihe banyere a temometa na -ese n'elu mmiri.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide n'aka na temometa iko mmiri ara gị agaghị apụ, ma ọ bụ nwee azụ na -agba agba nke nwere ike ibugharị ya ngwa ngwa, gbakwunye iko ọ suụ secondụ nke abụọ iji chekwaa ya.
Gbalịa mgbe niile na temometa, ụdị ọ bụla, na -anọpụ anya na mmiri ọkụ mgbe niile nke akwarium, ebe nke a nwekwara ike imetụta ọnọdụ okpomọkụ ọ na -edeba.
N'ime nnukwu akwarium, ị nwere ike were ọtụtụ temometa gbasasịa gburugburu ebe ahụ ka ị dowe ọnọdụ okpomọkụ n'ogo zuru oke ma gbochie mgbanwe na -eme.
Uru ọzọ inwe temometa abụọ n'otu akwarium bụ nke ahụ na -eme ka ị hụ ma ọ bụrụ na otu n'ime ha abụọ ada na enwere mgbanwe okpomọkụ na mmiri.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa na debe temometa n'ebe na -anaghị akpaghasị azụ mana na n'otu oge ahụ na -enye gị ohere iji ọgụgụ otu anya mee ọgụgụ.
Echefula Lelee ntuziaka temometa gị iji hụ na ụzọ kacha mma iji ya wee nweta ihe kachasị na ya, ebe ụdị ọ bụla dị iche.
Kedu ihe ga -eme ma ọ bụrụ na temometa akwarium mebiri
Tupu mgbe ahụ, nne nne anyị were temometa mara mma juputara na okpomoku anyị, juputara na mmiri ọla ọcha mara mma nke ukwuu mana ọ na -egbu egbu nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ dị ụkọ ugbu a ma ọ bụ ọbụna machibidoro iwu iji mercury na -emepụta temometa, ọ nwere ike bụrụ usoro a na -emekarị na ụdịdị ochie, si otu a ọ dị mkpa ka ị jide n'aka na ejighị ihe a eme temometa ị ga -eji mee yaMa ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ọ daa, ọ nwere ike merụọ azụ gị ma merụọ mmiri.
Kechioma ejighị mercury mee temometa nke ọgbara ọhụrụ, mana yana ihe ndị ọzọ na -enyekwa ohere ịgụ ọnọdụ okpomọkụ, dịka mmanya na -acha ọbara ọbara. Ọ bụrụ na otu n'ime temometa ndị a agbaji, ọ dabara nke ọma na azụ gị agaghị anọ n'ihe egwu, ebe mmanya na -adịghị emerụ ahụ.
Igwe temometa akwarium bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka ọnọdụ okpomọkụ nke akwarium anyị ghara ịgbanwe. na azụ anyị dị mma ma nwee obi ụtọ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ụdị nke anyị na -agaghị ahụ nke na -adabaghị mkpa anyị na nke azụ anyị. Gwa anyị, ị nwarala ụdị temometa ndị a? Nke na -ahọrọ? Ị chere na anyị ahapụla ndụmọdụ ọ bụla inye?
Isi iyi Thesprucepets, Aquariadise
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Igwe temometa akwarium
Perlon maka akwarium